Ireo tetikasa mitondra zavabaovao ho amin’ny « andavanandro vaovao » ao Ekoatora · Global Voices teny Malagasy
Tetikasa roa nivoaka ho mpandresy nony farany
Nandika (fr) i Stéphanie d'Hausen
Voadika ny 25 Jona 2020 5:37 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, русский, Español
Chris Chalcraft sy Greg Partyka nandritra ny “hackathon” momba ny “géophysique” tao Houston (Texas) tamin'ny 2013. Sary an'i Matt tao amin'ny Flickr, nampiasàna ny lisansa CC-BY 2.0.
Ny tranonkala ekoatoriàna Ojo al Dato no nivoahan'ity lahatsoratra ity voalohany, avy eo nokiraina sy naverina navoakan'ny Global Voices. Ity rohy ity dia mitondra ho amina lahatsoratra amin'ny teny Espaniôla.
Raha tsy asiana fanamarihana manokana dia mitondra mankany amina lahatsoratra amin'ny fiteny espaniôla avokoa ny rohy rehetra ato anaty lahatsoratra.
Taorian'ireo volana maro nihibohana noho ny COVID-19, eritreretin'i Ekoatora izao ny fiverenana ho amin'ny andavanandro vaovao, saingy miaraka aminà hevitra vaovao, vokatr'ilay Hackathon izay notanterahana manontolo tety anaty aterineto tamin'ny 29 sy 30 Aprily.
Namely an'i Ekoatora ny COVID-19 ka 3.642 no maty araka ny antontanisa ofisialy, na dia tombanana ho be lavitra noho io aza no tena isa nisy.
MediaLab (Ciespal), GIZ (fiarahamiasa alemàna), ny Vovonana ho an'ny fandraharahàna sy ny famoronana (Alianza para el Empredimiento e Innovación) ary ny Tambajotra Fikarohana momba ireo Fahalalàna, ny rindrambaiko ary ny “hardware” malalaka (Red de Investigación de Conocimiento, Software y Hardware Libre) no nikarakara ilay Hackathon taorian'ny krizy. Afaka vakiana eo amin'ilay tranonkala ny hoe : « Tsy ho toy ny omaly izao tontolo izao, tsy nampoizina ny vely kanonta nanjo ary zara raha nahavita nandresy ny vokany isika. Manoloana ny tontolo vao manangasanga, ahoana no hialàna amin'izay sary misy antsika izay ? »
Ity “Hackathon” ity dia vokatry ny hetsika fandraisana andraikitra iray hisarihana ny fandraisan'ny olontsotra anjara, izay ny fiarahamonina sivily sy ONG vitsivitsy no nitarika manontolo azy, hoy i Iván Terceros. Nampiany hoe : « Mino aho fa nisy fotoana iray, liana te-hanohana ilay “Hackathon” ny fanjakàna, saingy efa tamin'ny fotoana farany izany vao nitranga, kanefa ilay zavatra efa tena tao anatin'ny firoboroboany sahady. Tsy nanao afa-tsy ny nandefa taratasy fanehoana fahavononana ny fanjakàna, saingy rehefa aravona, efa tany amin'ny fotoana nanahirana ny hitsofohana tao anatin'ilay tetikasa. »
Iván Terceros, mpikatroka, mpahay fiarahamonina sady mpikambana ao amin'ny MediaLab, iray tamin'ireo fikambanana nandrindra ilay “Hackathon taorian'ny krizy” dia nanazava ho an'ny Ojo al Dato fa tetikasa 116 no nisoratra anarana, saingy 52 monja no nanolotra volavolan-tetikasa feno. « Kanefa ireo tetikasa 52 mbola notombanan'ireo fikambanana 33 mpiara-miombona antoka. », hoy izy nanampy.
19 tamin'ireo tetikasa 52 no voafantina. Navoaka tao amin'ny tranonkala natao ho an'ilay Hackathon ny antsipirihany momba ireny tetikasa ireny. Avy eo, nisy dingana napetraka hanaovan'ny daholobe ny safidiny. « Nangatahanay ireo tarika mba hampiditra ny tetikasan-dry zareo sy hanentana ireo namany sy ny olona hisafidy azy », hoy i Iván Terceros. Nifarana tamin'ny 28 May io fisafidianan'ny daholobe io.
Ny 30 May, nampitaina nivantana tamin'ny YouTube ny vokatra farany. Raha ny fisafidianana no asiana resaka, nirona betsaka nankany amin'ny tetikasa Wiyapoint sy Chasquicheck ny ankamaroan'ny safidin'ny olona.
Wiyapoint, izay nahazo ny isa betsaka indrindra, dia hahazo ny fanohanan'ilay sehatra famatsiambola ifandrimbonana “Green Crowds”, ho an'ny fanoratana anarana ao amin'ilay sehatra, ny fanombohana ny fanentanana, ny doka hatao ety anaty tambajotra sôsialy ary ny fanapariahana amin'ny alàlan'ny imailaka. Tohana iray izay amin'ny ankapobeny dia mahatratra eo amin'ny Arivo dolara eo. Hahazo vola mitovy amin'izay koa ny Chasquicheck, fa avy amin'ny fikambanan'ireo matihanina amin'ny fitantanana ny kinanga (risk) ao Ekoatora.
Ireo zavabaovao ho an'ny tontolo aorian'ny COVID-19
Ny tetikasa Wiyapoint dia famoronana fampiasa iray ho an'ny finday, ikendrena ny hanomezana valisoa ireo mpanjifa tsy mampiasa plastika rehefa miantsena, raha ny Chasquicheck kosa indray dia famokarana sehatra virtoaly iray ho fanamarinana, famantarana ary fanasokajiana ny vaovao sy torohay entina miady amin'ny fakom-baovao (vaovao diso).
14 ireo tetikasa hafa nahazo ny fandrisihan'ny ampahany tamin'ireo mpitsara. Toy izany ohatra ny tetikasa zaridaina fambolena sakafo mahavita tena izay mety afaka hanentsina ny mety ho tsy fahampian-tsakafo aterak'ilay valanaretina. Ny Grupo Faro [en] sy ilay mpikotrika orinasa “La Libertad” dia hitondra ny fahaizamanaony ara-teknika hahatratra hatramin'ny arivo dolara. Ny tetikasa Todos Más Cerca (Mifanakaiky kely daholo) dia hahazo famatsiambola telo arivo dolara avy amin'ny Fandaharanasan'ny Firenena Mikambana ho an'ny Fampandrosoana (PNUD), ary “La Libertad” sy ny masoivoho fampiroboroboana ara-toekarena Conquito no hisahana ny tan-tsoroka, ny fanarahamaso akaiky ary ny fitarihan-dàlana.
Sehatra virtoaly ny “Todos Más Cerca”, izay mampifandray ireo fandraharahàna madinika sy salantsalany ho fanampiana azy ireo hanetsika indray ny toekareny, amin'ny alàlan'ny fanolorana ny vokatr'izy ireo ho an'ireo mpanjifa akaiky azy. Nisy ny fifanarahana nifanaovana tamin'ireo Tranoben'ny Varotra tany amin'ireo faritra isankarazany tao Ekoatora, toy ny Zamora, Loja, Cuenca, ankoatra ireo maro hafa, ny tanjona dia ny hampihenana ny fitangorongoronan'ny olona be loatra mety vao mainka hampitombo ny isan'ireo tratry ny COVID-19.
Ilay “Hackathon” dia iray tamin'ireo hetsika fandraisana andraikitra am-polony misy eran'izao tontolo [ang] izao mba hiatrehana ny aorian'ny fihibohana. Nohazavain'i Iván Terceros fa, ho an'i Ekoatora, ny MediaLab dia ho eo mandrakariva hiaraka amin'ireo tetikasa notontosaina mba hahafahan'izy ireny ho tsara ketrika sy hivoatra mandritra ny taona. Nofintininy hoe : « Traikefa goavana ho antsika rehetra izany. »